Teny faran'izay tsara indrindra nataon'i Kekkai Sensen tamin'ny fotoana rehetra (miaraka amin'ny sary) - Hafa
Kekkai Sensen's Anime GREATEST Anime Of All Time (Blood Blockade Battlefront)
Teny nalaina nataon'i Kekkai Sense avy amin'ireto litera manaraka ireto:
miaina tahotra ve ny masinina toa anao
Kekkai Sensen, fantatra ihany koa amin'ny hoe 'Blood Blockade Battlefront' dia hetsika / anime supernatural fanta-daza amin'ny tontolo ambanin'ny indostria anime.
Mitovy amin'ny karazana anime amin'ny karazany, misy minitra volamena misy teny nindramina azonao ifandraisana ary makà aingam-panahy.
Eto izy ireo.
Teny fampiasa farany Kekkai Sensen:
“Rehefa zatra ny tsy fanao ianao, dia manjary maloto.” - Leonardo Watch
lisitry ny anime voatanisa tamin'ny hulu 2017
“Rehefa toa tsy manampy intsony ny raharaha, raha manokatra ny masonao ianao ary mijery tsara dia tsara… Tsara lavitra noho ny mihodina ny lamosinao sy manafina ny masonao.” - Leonardo Watch
2. Zed O'Brien Quote
'Nahita ny tenanao ho toy ny zazakely fotsiny ianao, ary marina ny anao, dia izany tokoa ianao. Mikarakara anao matetika ianao, falifaly matetika, ary mazàna ianao no tsy mahita. Ianao dia manana tondro ara-pitondrantena mahery vaika, fiahiahiana ireo namanao, ary voninahitra. Fantatro fa tsy mahita an'ity ianao, fa ny mahazatra anao, tsara lavitra azy io. Ny hafa rehetra dia hiantso azy io ho be herim-po sy mendri-kaja. Ny olona misy anao no mahatonga anao tsy mieritreritra indroa ny filaminanao manokana rehefa manampy ny namanao. 'Fa mahazatra anao fotsiny izany. ' - Zed O'Brien
3. William Macbeth Quotes
“Tombony ho an'ny velona ny fahafatesana. Lahatra tsy misy antony, tsy mitsahatra mamindra, mandrakariva. Mandalo ve izany zavatra izany. Tsy afaka miaina sy manadino momba ny fahafatesana ny olona. Ny famoizam-po dia ahy, hadinon'ny fahafatesana, farafaharatsiny afaka mamihina ny faniriako amin'ny takariva, ary ny torimaso. ” - William Macbeth
“Samy mieritreritra ny olona amin'ny fotoana sasany raha misy dikany na tsia ny zavatra ataony. Ho avy ve ny andro ahazoako izay manjo ahy, sa tsia? Hatraiza ny fiantraikan'ny fisiako eo amin'izao tontolo izao mihitsy, sa tsy izany? ' - William Macbeth
“Izaho? Mpandainga? Saika mandratra izany. Tsy te-hilaza ny marina rehetra fotsiny aho. ' - William Macbeth
4. Femt Quotes
“Rehefa te-hanao zavatra aho dia ataoko izany, na inona na inona sisa eto an-tany. Rehefa tsy manao aho dia tsy manao ary izany no izy. ' - Femt
5. Klaus Von Reinherz Quote
'Tsy kanosa ianao. Fantatro izany satria mbola tsy nilavo lefona ianao. Mijoro eto ianao. Raha mbola miatrika ny hazavana ianao ary mandray na dia dingana iray aza, dia tsy ho resy mihitsy ny fanahin'ny olombelona. ” - Klaus Von Reinherz
ny fotoana tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra
“Malemy ny olona. Noho ny fahalemeny dia mihetsika amin'ny fomba tsy misy fanajana ny tenany izy ireo indraindray. Fa avy eo, ka ahoana raha manao izany ry namako taloha? Na dia tratry ny fihemorana arivo aza aho… tsy antony hanovana ny fomba fiainako… ny fiainako izany! ” - Klaus Von Reinherz
“Dingana iray ny tongotrao ety ivelany, ary amin'ny alàlan'ny paingotra iray dia afaka mandratra olona ianao; miaraka amin'ny tsindry bokotra iray dia azonao atao ny mitsoka olona maro indray mandeha. Ity tontolo ity dia tena mpitaingin-tsoavaly amin'ny fahombiazan'ny herisetra. Mbola… na mifampitifitra amin'ny famaky vato, mifampitifitra amin'ny sabatra, mifampitifitra amin'ny basy, mifampanozona amin'ny majia, na mifampitifitra amin'ny balafomanga, noho ny antony sasany, misy ny filana mitazona antsika, izay tsy afaka mivoatra lavitra isika. ” - Klaus Von Reinherz
6. Mary Macbeth Quotes
'Na dia izao aza, roapolo taona taorian'ny fahafatesan'i Kristy, dia lavitra amin'ny fandriampahalemana izao tontolo izao.' - Mary Macbeth
“Maty daholo ny olona amin'ny farany, na manana fahefana izy na tsia. Izany no antony tokony hieritreretanao ny zavatra ho vitanao mandritra ny androm-piainanao. ' - Mary Macbeth
“Tsy heverinao ho zava-poana ve ny miaina ao anaty tahotra ny fahafatesana? Ny tiako holazaina dia hoe ho faty ny olona rehetra indraindray, ka misy antony ve ny mody tsy mahita azy io amin'izao fotoana izao? Na kosa, manontany tena aho raha mieritreritra izy ireo fa tsy mampaninona azy ireo izany, satria tsy ho faty izy ireo. ' - Mary Macbeth
Ny lisitra faratampon'ireo teny nalaina «Fate Stay Night» Ao amin'ny Internet
20 amin'ireo tsangambato Charlotte tsara indrindra mba tadidio ny Anime Nosoratan'i
anime folo tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra
anime miaraka amin'ny hery mihoatra ny natiora sy ny fiainam-pianarana
andian-tsarimihetsika anime lehibe indrindra tamin'ny fotoana rehetra